Mutsara wakanakisa weKazuo Ishiguro | Zvazvino Zvinyorwa
Mazuva mashoma apfuura iyo Mubayiro weNobel muMabhuku 2017 kupa seakakodzera zvakafanana kumaJapan Kazuo Ishiguro. Kubva ipapo, muActualidad Literatura, iwe wanga uine zvinyorwa zviviri nezvechimiro chake:
Kazuo Ishiguro, Mubayiro weNobel muMabhuku 2017, kwatakakupa nhau maminetsi mashoma mushure mekuzivikanwa uye kwatakakuudza muchidimbu nezvese zviri zviviri hupenyu nebasa remunyori.
Uye pakupedzisira "Mabhuku matatu akanakisa aKazuo Ishiguro, iyo Mubayiro mutsva weNobel muMabhuku", kwataitaura nezve izvo isu zvataifunga 3 akanakisa mabasa akafanana, nehurongwa hwavo nemamwe.
Zvakanaka, nhasi tinokuunzira chechitatu uye chazvino, chinyorwa chekupedzisira nezve munyori uyu. Isu tinokusiya iwe nezvatinofunga zvakanakisa mitsara yaKazuo Ishiguro. Chinyorwa chakareruka asi chisina kukosha pane icho. Tinovimba unoifarira!
Mitsara nezvidimbu zvemabhuku naKazuo Ishiguro
Haufunge here kuti dzimwe nguva tinokurumidza kutevedzera maAmerican? Ini ndiri wekutanga kufunga kuti zhinji dzetsika dzedu dzekare dzinofanirwa kuitwa kuti dzitsakatike zvachose, asi… Haufunge here kuti dzimwe nguva, pamwe neyakaipa, tinobvisawo zvinhu zvakanaka? Chokwadi ndechekuti izvozvi Japan inoratidzika semwana ari kudzidza kubva kune mukuru mutorwa. (Bhuku: «Artist of zvinoyangarara nyika»).
Chiratidzo chekukunda kune vamwe kunoda kuziva. Kubudirira kunogara kuri kuzviisa pasi, munhu anogona kuzviwana zvakatarisana negalari uye anonzwa kunetseka mukati.
Ivo vanofanirwa kuziva kuti dzimwe nguva iyi ndiyo nzira iyo zvinhu zvinoshanda nayo mupasi rino. Pfungwa dzevanhu, manzwiro avo, rimwe zuva rinoenda munzira, uye rimwe zuva mune imwe. (Bhuku: "Usambofa wakandisiya").
Munguva dzakadai apo vanhu vari kuramba vachiita hurombo mazuva ese uye vana vatinoona mumugwagwa vari kurwara nekunzwa nzara mazuva ese, chekupedzisira chinoitwa nemhizha kuzvivharira nekupenda mifananidzo yehure. (Bhuku: «Artist of zvinoyangarara nyika»).
Pandinotarisa mafirimu akashandurwa kuita mabhuku, ndinoedza nesimba kuti ndisarangarira bhuku racho. Izvo zvakakosha kuti uone iyo bhaisikopo semuvhi.
Ini ndinoda kufunga kuti panopera nyaya yega yega imwe inotangira yega yega inogona kuve iri nani.
Ndokusaka takarwa uye ndizvo zvatakakunda. Tinokunda kodzero yekuva vagari vakasununguka. (Bhuku: «Zvasara zvezuva racho »).
Nei tichifunganya zvakanyanya nezve izvo zvataifanira kunge takaita kana kusaita kutungamira nzira yatakatora hupenyu hwedu? (Bhuku: "Rasara zuva").
Unogona kunge uri munhu mukuru, asi hupenyu hausi hwekungoda munhu mumwe chete. (Bhuku: "Hupenyu Hweusiku").
"Chizvarwa chitsva chemabhuku kugadzirwa kwevapepeti."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Aya akanakisa mitsara yaKazuo Ishiguro